“Emechaala M Nwere Onwe M.” | Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Emechaala M Nwere Onwe M.”
Akụkọ Brian Hewitt kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1981
ABỤ M ONYE: AMERỊKA
NDỤ M BIRI: ABỤ M NWA MMEFU
A mụrụ m n’otu obodo dị jụụ nke dị n’akụkụ Osimiri Ohayo. Aha ya bụ Maụndsviil. Ọ dị n’ebe ugwu West Vejinia, n’Amerịka. Abụ m nwa nke abụọ n’ime ụmụ anọ nne na nna m mụrụ. Anyị dị ụmụ nwoke atọ na otu nwaanyị. Ebe niile na-akpọtụ akpọtụ n’ụlọ anyị. Mama m na papa m na-arụsị ọrụ ike, ha na-akwụwakwa aka ọtọ. Ha hụkwara ndị ọzọ n’anya. Ezinụlọ anyị abaghị ọgaranya, ma anyị na-enweta ihe na-ezuru anyị. Ebe ọ bụ na mama m na papa m bụ Ndịàmà Jehova, ha kụziiri anyị Baịbụl mgbe anyị bụ ụmụaka.
Ma mgbe m na-eto okorobịa, obi m pụrụ n’ihe ndị a kụziiri m. M malitere iche na ime ihe Baịbụl kwuru abaghị uru. Echekwara m na naanị ihe ga-eme ka m nwee obi ụtọ bụ ịna-eme ihe ọ bụla masịrị m. Tupu mụ amara ihe na-emenụ, akwụsịla m ịga ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. Ụmụnne m abụọ sokwa m na-eme otú ọ bụla masịrị ha. Mama anyị na papa anyị mere ihe niile ha nwere ike ime ka ha nyere anyị aka, ma o nweghị isi.
Amaghị m na otú ahụ m si chọọ ịna-eme ihe ọ bụla masịrị m ga-etinye m ná nsogbu. Otu ụbọchị m si ụlọ akwụkwọ na-alọta, otu enyi m nwoke nyere m sịga ka m ṅụọ, m naara ya sịga ahụ ṅụọ. Malitezie ụbọchị ahụ gawa, m malitere ịkpa àgwà ọjọọ ndị ọzọ. Ọ dịghị anya, mụ amalite ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịṅụbiga mmanya ókè. M malitekwara ibi ndụ rụrụ arụ. Eji m nwayọọ nwayọọ malite ịṅụ ọgwụ ọjọọ ndị ka ndị nke ahụ m na-aṅụbu njọ. Aṅụkwara m ọgwụ ndị a ọtụtụ afọ. Ọgwụ ọjọọ ndị ahụ m na-aṅụ bịaziri rie m ahụ́. Mgbe ọgwụ ọjọọ ahụ m na-aṅụ rikwuru m ahụ́, m maliteziri ire ya ere ka m nwee ike ịna-enweta ego m ga-eji na-ebi ndụ ọjọọ m na-ebi.
Ọ bụ eziokwu na anaghị m ege akọnuche m ntị, akọnuche m na-agwa m mgbe niile na ndụ rụrụ arụ m na-ebi adịghị mma. Ma, echere m na ebe ọ bụ na ọgwụ ọjọọ eriela m ahụ́, ọ dịghị ihe ga-eme ka m hapụ ya. N’agbanyeghị na mụ na ọtụtụ ndị na-anọ ma n’ebe a na-eme oriri ma n’ebe a na-agba egwú disko, owu na-amakarị m, obi anaghịkwa adị m mma. Mgbe ụfọdụ, m cheta na nne na nna m bụ ezigbo mmadụ, ya ana-eju m anya otú m si kpafuo.
N’agbanyeghị na m chere na enwekwaghị m mmekwata, ma ndị ọzọ echeghị otú ahụ. N’afọ 2000, mama m na papa m gwara m ka m soro ha gaa mgbakọ distrikti nke Ndịàmà Jehova. M sokwa ha gaa, ka a sịkwa na mụ agaala. O juru m anya na ụmụnne m abụọ ahụ so m kpafuo bịakwara mgbakọ ahụ.
Mgbe anyị nọ ná mgbakọ ahụ, m bịara cheta na mụ abịabuola ebe ahụ gbaa egwú disko ihe dị ka otu afọ tupu anyị abịa mgbakọ ahụ. Ihe m hụrụ mgbe anyị bịara mgbakọ ahụ metụrụ m n’obi. Mgbe anyị nọ n’ebe ahụ gbaa egwú disko, a tụsasịrị ihe ndị ruru unyi n’ebe niile. Ebe niile na-esikwa sịga sịga. Ihu anaghịkwa atọ ọtụtụ ndị bịara ebe ahụ ọchị. Egwú a kụkwara ebe ahụ na-eme ka obi na-ajọ mmadụ njọ. Ma, ná mgbakọ ahụ anyị gara, ndị bịara ya nwere ezigbo obi ụtọ, ha jikwa obi ụtọ nabata m, ọ bụ eziokwu na ọ dịla anya mụ na ha hụsọrọ. Ha debere ebe niile ahụ ọcha. Ihe a kụzikwara ná mgbakọ ahụ na-eme ka mmadụ nwee olileanya na ihe ga-adị mma n’ọdịnihu. Mgbe m hụrụ otú ihe ndị ha na-amụta na Baịbụl si na-abara ha uru, m jụwara onwe m ihe mere m ji hapụ ihe Baịbụl kwuru ga na-eme ihe ọzọ!—Aịzaya 48:17, 18.
“Ihe ndị m mụtara na Baịbụl emeela ka m kwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ, meekwa ka m kwụsị ire ya ere. O meekwala ka m bụrụ ezigbo mmadụ”
Ozugbo anyị lọtara mgbakọ ahụ, ekpebiri m na m ga-ebidokwa ịga ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. Ụmụnne m abụọ ndị ahụ kpebikwara ịlọghachi n’ihi ihe ndị ha hụrụ na ihe ndị ha nụrụ ná mgbakọ ahụ. Anyị atọ kwetara ka a mụwara anyị Baịbụl.
Ihe kacha metụ m n’obi bụ ihe Jems 4:8 kwuru. Ọ sịrị: “Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga-abịarukwa unu nso.” M chọpụtara na ọ bụrụ na m chọrọ ịbịaru Chineke nso, m ga-akwụsị ihe ọjọọ ndị m na-eme. Ụfọdụ n’ime ihe ọjọọ ndị m kwesịrị ịkwụsị bụ ịṅụ sịga, ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịṅụbiga mmanya ókè.—2 Ndị Kọrịnt 7:1.
Mụ na ndị enyi m mbụ kwụsịrị ịkpa. M nwetakwara ndị enyi ọhụrụ, bụ́ ndị na-efe Jehova. Otu nwoke mụụrụ m Baịbụl nyeere m ezigbo aka. Nwoke a bụ okenye n’ọgbakọ Ndịàmà Jehova. Ọ na-akpọkarị m na fon, na-abịakwa n’ụlọ m ka ọ mara otú m mere. Ruo taa, mụ na ya ka bụ ezigbo enyi.
Ná mmalite afọ 2001, mụ na ụmụnne m abụọ ndị ahụ nyefere Chineke onwe anyị, e meekwa anyị baptizim. Obi tọrọ mama m na papa m na nwanne m nwoke m tọrọ, nke na-esoghị anyị kpafuo, ezigbo ụtọ na anyị niile na-efezi Jehova.
M na-echebu na ime ihe Baịbụl kwuru anaghị ekwe mmadụ megharịa ahụ́. Ma ugbu a, achọpụtala m na ime ihe Baịbụl kwuru na-abara mmadụ ezigbo uru, ọ na-emekwa ka mmadụ ghara ịba ná nsogbu. Ihe ndị m mụtara na Baịbụl emeela ka m kwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ, meekwa ka m kwụsị ire ya ere. O meekwala ka m bụrụ ezigbo mmadụ.
Obi dị m ụtọ na m so ná ndị na-efe Jehova n’ụwa niile. Ha hụrụ ibe ha n’anya n’eziokwu, ha na-efekọ Chineke ọnụ ma dịrị n’otu. (Jọn 13:34, 35) Alụrụ m otu Onyeàmà Jehova aha ya bụ Adrianne. Chineke ji ya gọzie m. Ahụkwara m ya n’anya nke ukwuu. Anyị na-enwe obi ụtọ n’ihi na mụ na ya na-efekọ Chineke ọnụ.
Kama ịgbawa mbọ ka m nweta ihe ga-abara naanị m uru, m na-ekwusa ozi ọma oge niile ugbu a, na-akụziri ndị mmadụ otú ime ihe Baịbụl kwuru ga-esi baakwara ha uru. Obi ụtọ m na-enweta n’ọrụ a karịrị obi ụtọ m nwetụrụla. Obi siri m ike ikwu na Baịbụl agbanweela ndụ m. Emechaala m nwere onwe m.
“Emechaala M Nwere Onwe M”